About Us - U-Hebei Shouzheng Technology Co, Ltd.
Umshini Wokusika Imaski Eshesha Kakhulu
I-Hebei Shouzheng Technology Co, Ltd ngumkhiqizi wezokwelapha osezingeni eliphezulu futhi owenza imishini yezokwelapha, ongumnikazi webhizinisi lezitolo nowangaphandle, oseShijiazhuang City, esifundazweni saseHebei China.
Umkhiqizo wethu ophambili ufaka imaskhi yomphakathi, imaskhi yezokwelapha, imaski ye-kn95, isithambisi esincane, ukupholisa isiziba, izinwele ezibalulekile, ukhilimu we-dermatitis, ukhilimu we-hemorrhoids, i-gynecology gel, amagilavu ​​we-nitrile, amagilavu ​​e-PVC, omatilasi abangashisi, i-cotton swabs, izivakashi, nezinye izinto ezidala ukusetshenziswa kwezokwelapha, njll.
Sithole izitifiketi ze-FDA, CE, ze-ISO, ziqinisekisa ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo. Ithimba lethu lokukhiqiza elinekhono, iqembu lezokuthengisa eliqeqeshiwe, ithimba lokulawula ikhwalithi eliqinile nabakhi bethalente bezinceku ngeke bakunikeze izinsiza ezingakhathazeki.
Isevisi yangaphambi kokuthengisa: Ukubonisana ngebhizinisi lochwepheshe kanye nensizakalo yamahhala yokuqamba. Sekela i-OEM / ODM ngokwezifiso.
Ngaphansi kwenkonzo yenkontileka: Ukuqaliswa kokulawulwa kwekhwalithi ye-ISO ngokuqinile, ukulethwa okufika ngesikhathi, ukuhlelwa kokuhlinzekelwa kwezokuphepha kanye nokuxhaswa okuhle kwezimali.
Inkonzo Ngemuva Kokuthengisa: Sizothatha umdlandla we-100% ukuxazulula futhi senze ubungako besigidi sephutha elingaba khona ngesikhathi.
Konke esikwenzayo, ukunciphisa izindleko zakho zokuthenga nokulungisa, futhi nokukunika amandla ukuncintisana kwemakethe yendawo. Ukusebenza okugcwele kukaSOSUN, kuzokusindisa umthwalo omningi futhi kukulethele nesipiliyoni.
Simema ngobuqotho amakhasimende e China nase Abroad ukuthi athuthukise ukunakekelwa okunempilo kanye nebhizinisi lezokwelapha futhi asebenzele amathemba amahle ndawonye. Ngibheke ukusebenzisana nawe isikhathi eside!